Yemagariro Networks neNhamba | Martech Zone
Social Networks neNhamba
Chishanu, June 24, 2011 Chitatu, October 26, 2011 Douglas Karr
Nezuro, isu takaratidza yakanaka Infographic pane iyo Nhoroondo yeSocial Networking. Nhasi, isu tine imwe inonakidza Infographic - Iyo Yenhasi Nyika Yemagariro Networks. Iko kwakadzika-kutarisa kwepasirese kwemasocial network nehukuru, huwandu hwevanhu, uye kukura - ichipa imwe nzwisiso yekuti kana isu tasvika panogutsa poindi. Iyi infographic ndeyakakosheswa ne Regedza Zvemagariro Midhiya.
Chati chimwe chinogona kupa fungidziro isiri iyo Ning, uyo akachinja bhizinesi modhi kubva mahara kuenda kune akabhadharwa network. Ehezve ivo vaizorasikirwa nevanhu vakati wandei mukufamba - asi vari kunyatso kukura zvakanaka muna 2011 seSoftware seSevhisheni network network mupi.
Mari Yakakura: TinderBox
Kana Dilbert Anoita SEO Majee…
Chokwadi inonakidza infographic, asi pakanga pasina manhamba chero kupi! Zvinofadza kuziva kuti Plaxo ndiyo nzvimbo inosanganisirwa vanhu vekare, asi zvingave zvakanyanya kubatsira nenhamba dzakaoma imomo.
Ndatenda nekugovera Doug
Hi Jeremy! Iyo data nemhedzisiro iri mumushumo wakanyorwa pazasi peInfographic (ndaifanira kunge ndakazvitaura mupositi! http://bit.ly/2011-social-analysis
Ndatenda nekundichengeta ndakatendeseka!
Hooray ye LinkedIn!